कम विद्यार्थी भएका विषय समायोजन गर्दै त्रिवि • Nepal's No. 1 Digital News Paper .
काठमाडौँ, २८ साउन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले एक क्याम्पसमा कम्तीमा १० भन्दा कम विद्यार्थी हुने विषयलाई अर्काे क्याम्पसमा समायोजन गर्ने भएको छ ।
नेपालमा पहिलो विश्वविद्यालयका रुपमा २०१६ मा यो संस्थाको स्थापना भएको थियो । विसं १९७५ मा भारतको कलकता विश्वविद्यालय र त्यसपछि पटना विश्वविद्यालयको स्वीकृतिमा त्रिचन्द्र कलेज स्थापना भएको थियो । त्रिवि स्थापना हुनुअघि चलेका १६ निजी कलेजलाई समायोजन गरेर त्रिवि बनेको हो । रासस
प्रेस चौतारीद्धारा ११ पत्रकार पुरस्कृत
नागरिक अगुवाको हुँङ्कार विधिको शासन नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी
बलात्कारीलाई प्रहरी चौकीबाट थुतेर यसरी कुटिकुटी मारियो !